Nhau - Ndeupi mutsauko uripo pakati pematatu-masendimita, mashanu-masendimita, manomwe-masendimita uye mapfumbamwe-rukoko coextrusion mafirimu
Usazviomesera kavha zvinhu, kazhinji ane matatu, mashanu, manomwe, mapfumbamwe maficha. Ndeupi musiyano uripo pakati pezvikamu zvakasiyana zvemafirimu? Iri bepa rinotarisa pane ongororo, yako mareferenzi.
Kufananidza kwemashure mashanu uye matatu matete
Chipingaidzomune shanu dhizaini dhizaini inowanzo iri mukati, inoisimbisa kubva mumvura iri mumhepo. Nekuti iyo yekuvharira dura iri mukati, zvimwe zvinhu zvinogona kushandiswa kusimudzira zvakanyanya chipingaidzo kuita. Nylon inogona kushandiswa mune yepakati dura, kuitira kuti iyo 5-rara dhizaini ne PE pamusoro pevhu inogona kubata nezvimwe zvinhu zvakafanana ne PE firimu uye nekuvandudza maitiro kugona. Zvakare, processor inogona kushandisa iyo pigment mune yekunze dura isina kukanganisa iyo yekubatanidza dura kana chipingamupinyi chirafu.
Mafirimu matatu akaturikidzana, kunyanya ayo anoshandisa nylon, anowanzo tenderera nekuda kweakasiyana maficha epanyama mune asymmetric zvivakwa. Kune 5-dura dhizaini, zvakajairika kushandisa symmetric kana padhuze symmetric chimiro kudzora curl. Iyo crimp mune ye3-dura dhizaini inogona kungodzorwa nekushandisa nylon copolymer. Mune 5-rukoko dhizaini, chete kana processor painogona kushandisa nylon 6 ndipo pazvinokwanisika kuwana nylon nhete ingangoita hafu yekukora kwematanho matatu. Izvi zvinochengetedza mbishi zvinhu zvemari apo zvichipa zvakafanana chipingaidzo zvivakwa uye nekuvandudza kuita.
Kufananidza pakati pevhu rechinomwe uye pasi rechishanu
Zvemhando yepamusoro yezvipingamupinyi, EVOHinowanzo shandiswa sechipingaidzo kutsiva nylon. Kunyangwe EVOH ine yakanakisa okisijeni chipingaidzo kana yaoma, inozodzikira nekukurumidza kana yakanyorova. Naizvozvo, zvakajairika kumanikidza EVOH kuita maviri PE matanda mune mashanu-marara mamiriro kudzivirira hunyoro. Mune 7-rara EVOH chimiro, EVOH inogona kumanikidzwa kuita maviri ari pedyo PE matanda, uye zvobva zvachengetedzwa neyekunze PE dura. Izvi zvinonyatso gadziridza kwese oksijeni kusagadzikana uye zvinoita iyo 7-rara dhizaini isatapurike hunyoro.
Kupatsanurwa kana kubvaruka kunogona zvakare kuve dambudziko kune iyo shanu nyaya mamiriro. Iko kuvandudzwa kweanomwe-marongero dhizaini kunoita kuti iyo yakaoma chipinganidzo diki ipatsanurwe kuita maviri akafanana maturu nekubatanidza matete matete. Izvi zvinochengetedza chivhariso chivakwa nepo chichiita kuti pasuru iwedzere kuramba kuputsa kana kubvarura. Zvakare, iyo 7-rara dhizaini inogonesa iyo processor kubvarura rekunze dhizaini kudzikisa mutengo wezvinhu zvakagadzirwa. Mamwe mapolymamu anodhura anokwanisa kushandiswa sezvidimbu zvepamusoro, nepo mapuroma anodhura achigona kutsiva mazhinji ematanho apfuura.
Kuenzanisa pakati peburiro repfumbamwe uye pasi rechinomwe
Kazhinji, chipingamupinyi chikamu chepamusoro chinodzivirira firimu chinotora zvikamu zvishanu muchimiro. Nekuda kwekufambira mberi kwepolymer uye yekugadzira tekinoroji, iyo muzana yehuremu hwakazara hwechikamu ichi muchimiro chose chiri kuramba chichiderera, asi zvakafanana chipingaidzo chekuita chinochengetwa.
Nekudaro, zvichiri kudikanwa kuti uchengetedze huwandu hwefirimu ukobvu. Kubva pamatanho manomwe kusvika pamatanho mapfumbamwe, mapurosesa anogona kuwana akanakisa emakanika, kutaridzika uye kuita kwemutengo. Kune akakwirira ekuvharira mafirimu, iyo yekuwedzera kuita kwakawanda kunopihwa ne7-rukoko kana 9-rukoko extrusion tambo inogona kutaridzika. Iko kuwedzera kwemutengo wekutenga 7-rukoko kana 9-masendimita extrusion tambo inogona kuve nenguva yekubhadhara isingasviki gore rimwe kana ichienzaniswa ne5-layer yekugadzira tambo.